Maitiro Ekuchengetedza WordPress mune gumi Nyore Matanho | Martech Zone
Maitiro Ekuchengetedza WordPress mune gumi Nyore Matanho
Muvhuro, Kukadzi 10, 2020 Chipiri, February 11, 2020 Akshat Choudhary
Unoziva here kuti pamusoro pe90,000 hacks anoedzwa miniti yega yega paWebhusaiti saiti pasirese? Zvakanaka, kana iwe uine rako reWordPress-rine webhusaiti, iyo stat inofanira kukunetsa. Izvo hazvina basa kana urikumhanya nebhizimusi-diki bhizinesi. Hackers havasarudzi zvichienderana nesaizi kana kukosha kwemawebhusaiti. Ivo vari kungotsvaga chero kushupika uko kunogona kushandiswa kune kwavo kuvabatsira.
Iwe unogona kunge uchishamisika - nei mavhavha achinongedzera WordPress saiti munzvimbo yekutanga? Chii chavanowana nekuzvibata mune zvakashata zvakadaro?
Nei maHacker Target WordPress Sites?
Ngazvive paWordPress kana chero imwe chikuva; hapana webhusaiti yakachengeteka kubva kune vanobiridzira. Kuva kunyanya inozivikanwa CMS chikuva, WordPress masayiti anofarira 'hackers. Hezvino izvo zvavanoita:
Tsvaga nyowani kuchengetedzeka kusagadzikana, ayo ari nyore kuwana pane mashoma masayiti. Kana kamwe benzi rikadzidza nezve chero kushaya simba kana kusagadzikana, vanogona kushandisa ruzivo rwavo kunongedza mawebhusaiti akakura uye kukonzera kukuvara kwakawanda.
Dzorerazve traffic yako iri kuuya kune mawebhusaiti asina kukumbirwa. Ichi chikonzero chakajairika chekunanga nzvimbo dzekutengesa-nzvimbo dzakakwirira, semhedzisiro iyo webhusaiti yechokwadi inogona kurasikirwa nevashandisi vayo kune imwe webhusaiti inofungidzira.
Ita mari kana gadzira mari kubva pakutengesa zvigadzirwa zvinorambidzwa pamasaiti echokwadi kana kuburikidza nemarware akasiyana senge rudzikunuro kana kuchera crypto.
Kuwana mukana kune vakangwara kana zvakavanzika data senge data revatengi, data rebhizinesi rakavanzika, kana marekodhi emari ekambani. Hackers vanogona kuenderera mberi nekutengesa iyi data rakabiwa nemari kana kuvashandisa kune chero kusakwikwidza mukana wemakwikwi.
Zvino zvatava kuziva kuti mahabheri angabatsirikana sei nekubudirira kwekubira kana kukanganisa, ngatiendererei mberi nekukurukura nzira gumi-dzakaedzwa-uye-dzakaedzwa kuchengetedza WordPress saiti.
Maitiro 10 Akaratidzirwa Ekuchengetedza Saiti Yako
Neraki reWordPress, pane nzira dzakasiyana siyana dzaungashandisa kukwidziridza kuchengetedza kwewebhusaiti. Chikamu chakanakisa nezve idzi nzira ndechekuti mazhinji acho haana kuomarara uye anogona kuitiswa nechero novice WordPress mushandisi. Saka, ngatitangei.
Nhanho 1: Gadziridza Yako Core WordPress uye maPulagi uye Themes
Chinyakare WordPress zvinyorwa, pamwe neyekare plugins uye madingindira ndezvimwe zvakajairika zvikonzero zveWordPress masaiti kubiridzirwa. Hackers vanowanzoshandisa mabhugi ane chekuita nechengetedzo muiyo yapfuura WordPress uye plugin / theme shanduro dzichiri kumhanya pane mazhinji epaiti saiti.
Chaunonyanya kuchengetedza kubva kutyisidziro iyi kugara uchigadzirisa yako Core WordPress vhezheni pamwe nekuvandudza kune yazvino mavhezheni eakaiswa plugins / madingindira. Kuti uite izvi, kana gonesa iyo "Auto Gadziridza" mashandiro mune yako WordPress admin account kana kutora stock yako ese akaiswa plugins / madingindira.
Nhanho 2: Shandisa Firewall Kudzivirira
Hackers vanowanzo shandisa otomatiki bots kana IP zvikumbiro kuwana mukana kune WordPress saiti. Kana vakabudirira kuburikidza nenzira iyi, vabiridzi vanogona kukuvadza zvakanyanya pane chero saiti. Webhusaiti firewalls yakavakirwa kuti ione IP zvikumbiro kubva kunofungidzira IP kero uye vharira zvikumbiro zvakadaro kunyangwe vasati vasvika pawebhu server.
Firewall. Ruzivo chengetedzo pfungwa. Tekinoroji pfungwa yakasarudzika pane chena
Unogona kuita firewall chengetedzo kune yako webhusaiti nekusarudza:
In-yakavakwa firewalls - kubva kune yako webhu inobata kambani
Cloud-based firewalls - inogarwa pane ekunze gore mapuratifomu
Plugin-based firewalls - izvo zvinogona kuiswa pane yako WordPress saiti
Nhanho 3: Scan uye Bvisa Chero Malware
Hackers vanoramba vachiuya neyakajeka malware akasiyana kuti akanganise saiti. Nepo imwe malware inogona kukonzeresa kukuvara kwakanyanya uye nekuremadza zvachose webhusaiti yako, mamwe akaomesesa uye anonetsa kuona kunyangwe kwemazuva kana vhiki.
Kudzivirirwa kwakanyanya kubva kune malware kugara uchiongorora yako webhusaiti izere nezvirwere. Wepamusoro WordPress chengetedzo plugins seMalCare neWordFence zvakanaka pakuona kwekutanga uye kuchenesa malware. Aya plugins ekuchengetedza ari nyore kuisa nekumisikidza kunyangwe kune vasiri-tekinoroji vashandisi.
Nhanho 4: Shandisa Yakachengeteka uye Yakavimbika Webhu inomiririra
Pamusoro pechinyakare WordPress zvinyorwa uye plugins / madingindira, iyo webhu yekumisikidza setup ine yakakosha kutaura mune yako webhusaiti chengetedzo. Semuenzaniso, vabiridzi vanowanzo tarisa mawebhusaiti pane yakagovaniswa yekutambira chikuva iyo inogovera iyo yakafanana server pakati pemawebhusaiti mazhinji Kunyangwe kugovana kugovera kuchidhura, vanobiridzira vanogona kutapurira webhusaiti imwe chete vobva vaparadzira hutachiona kune mamwe mawebhusaiti.
Kuti uve parutivi rwakachengeteka, sarudza yewebhu yekubata chirongwa ine yakasanganiswa chengetedzo maficha. Dzivisa akagovana mauto uye, pachinzvimbo, enda kuVPS-yakavakirwa kana yakachengetedzwa WordPress yekutambira
Nhanho 5: Tora Backup Yakazara yeiyo yako Saiti saiti
Nzvimbo dzekuchengetedza webhusaiti dzinogona kuponesa kana chimwe chinhu chikaenda newebsite yako. WordPress backups inochengetera kopi yewebhusaiti yako uye mafaera e database panzvimbo yakachengeteka. Kana ukabudirira kubira, unogona kudzoreredza mafaira ekuchengetedza kuwebhusaiti yako uye kugadzirisa mashandiro ayo.
WordPress backups inogona kuitwa nenzira dzakasiyana siyana, asi yakanakisa nzira kune vasiri-tekinoroji vashandisi iri kuburikidza ne backup plugins senge BlogVault kana BackupBuddy. Nyore kuisa uye kushandisa, aya ekuchengetedza plugins anogona otomatiki backup-zvine chekuita zviitiko kuti iwe ugone kugara wakanangisa pane ako ezuva nezuva mabasa.
Nhanho 6: Dzivirira rako rePeoplePress Rekupinda Peji
Pakati pemapeji akajairika ewebhusaiti anotarirwa nevanoba, yako peji rekupinda reWordPress rinogona kupa nyore kuwana kumaakaundi ako akavanzika. Vachishandisa zvechisimba kurwisa, vabiridzi vanoendesa otomatiki bots ayo anowanzoedza kuwana mukana kune yako WordPress "admin" account kuburikidza neyekupinda peji.
Pane nzira dzinoverengeka dzekuchengetedza peji rako rekupinda. Semuenzaniso, unogona kuvanza kana kushandura yako default login peji URL, iri kazhinji www.mysite.com/wp-admin.
Yakakurumbira WordPress Login peji peji plugins senge "theme Yangu Login" inoita kuti iwe ugone kuvanza (kana kushandura) yako rekupinda peji zviri nyore.
Nhanho 7: Uninstall chero Asina kushandiswa kana Anoshanda Mapulagi uye Themes
Sezvambotaurwa, plugins / madingindira anogona kupa iri nyore gedhi revabiridzi kuti vagadzire kusagadzikana neako WordPress saiti. Izvi ndezvechokwadi zvakaenzana kune chero asina kushandiswa kana asingashande plugins uye madingindira. Kana iwe waisa nhamba huru yeiyi pane yako saiti uye hausisiri kuishandisa, zvinokurudzirwa kuti uibvise kana kutsiva neimwe inoshanda plugins / madingindira.
Unoita sei izvi? Pinda kune yako WordPress account se arun mushandisi uye tarisa iwo runyorwa rweazvino akaiswa plugins / madingindira. Delete ese plugins / madingindira ayo asisiri kushanda.
Nhanho 8: Shandisa Simba Pasipoti
Izvi hazvifanirwe kunge zviri pachena here? Asi, isu tichine mapassword asina kusimba senge pasiwedhi uye 123456 kushandiswa. Vabiridzi vanowanzo shandisa zvisina kufanira mapassword kuita akarwisa masimba masimba.
Kune vese vashandisi vako veWordPress, shandisa mamwe marondedzero.Shandisa mapassword eanenge mavara masere, nemubatanidzwa wemavara makuru nemadiki, alphanumerics, uye akakosha mavara. Chimwe chekuchengetedza chiyero chinofanirwa kunge chiri chekushandura ako WordPress mapassword kamwechete kamwe pamwedzi mitatu.
Nhanho 9: Tora SSL Chitupa cheWebhusaiti Yako
Ipfupi kune Yakachengeteka Socket Rukoko, SSL certification ndeyechokwadi inofanirwa kune yega webhusaiti, kusanganisira WordPress masosi. Nei ichinzi yakachengeteka? Yese SSL-yakasimbiswa webhusaiti inonyora ruzivo rwuri kupfuudzwa pakati pewebhu server uye mushandisi browser. Izvi zvinoita kuti zvive zvakaoma kune vanobiridzira kuti vatore uye vabe iyi yakavanzika data. Chii chimwe? Aya mawebhusaiti anofarirwawo neGoogle uye anogamuchira a yepamusoro Google chinzvimbo.
Kero yeInternet yakachengetedzwa kuratidza pane lcd skrini.
Unogona kuwana SSL chitupa kubva kune yako webhu inomiririra inomubata saiti yako. Zvimwe, iwe unogona kuisa maturusi senge Ngatisimbisei pawebhusaiti yako kune SSL chitupa.
Nhanho 10: Shandisa WordPress Webhusaiti Kuomesa
Chiyero chekupedzisira kuisa matanho ekuomesa webhusaiti akatemerwa neWordPress. WordPress Webhusaiti kuomesa inosanganisira matanho akati wandei anosanganisira:
Kuremadza iyo faira yekugadzirisa ficha kudzivirira kupinda kwekodhi yakaipa mune ako akakosha maWordPress mafaera
Kuremadza PHP faira kuuraya iyo inodzivirira vabiridzi kubva kuendesa mafaera eIPP ane chero yakaipa kodhi
Kuvanza iyo vhezheni yeWordPress iyo inodzivirira ma hackers kubva mukutsvaga yako WordPress vhezheni uye kutsvaga chero kunetseka
Kuvanza iyo wp-config.php uye .htaccess mafaera ayo anowanzo shandiswa nevabati kukuvadza yako WordPress saiti
Hapana WordPress saiti, hombe kana diki, yakachengeteka zvachose kubva kune vanobiridzira uye malware. Nekudaro, iwe unogona zvirokwazvo kuvandudza yako yekuchengetedza mamaki nekutevera imwe neimwe yeaya matanho gumi akataurwa muchinyorwa chino. Aya matanho ari nyore kuita uye haadi chero epamberi ruzivo rwehunyanzvi.
Kuita kuti zvinhu zvive nyore, mazhinji ekuchengetedza plugins anosanganisa akawanda eaya maficha, sekudzivirira firewall, yakarongwa scanning, malware kubviswa, uye webhusaiti kuomesa mune yavo chigadzirwa. Isu tinokurudzira zvikuru kuita kuti webhusaiti chengetedzo ive chikamu chakakosha cheako webhusaiti yekuchengetedza yekutarisa.
Regai tizive zvaunofunga nezvazvo. Takarasikirwa here nechero chakakosha chengetedzo chiyero chinofanira kuita? Tiudze mumashoko ako.
Tags: negadziriro yeparutiviblogvaultfirewall kudzivirirahack wordpresskuomesa sei WordPressnzira yekuchengetedza wordpresshtaccesshttpsmalcaremalwarechibatisokuchengetedzeka kusagadzikanaSslweb host
Akshat Choudhary agara achizvikudza pamusoro pekugona kwake kuzvidzidzisa zvinhu. Kubva kutanga BlogVault, Akshat akachinja divi-rake purojekiti kuita purojekiti ine pundutso iri kukwirisa nzvimbo nyowani munzvimbo yekutanga yeIndia. Kuva nhengo yenharaunda yeWordPress kweanoda kusvika makore gumi, Akshat anofarira kunzwisisa nzvimbo dzinotambura vashandisi. Kutenda kwekutanga kwaAkshat shure kwekuvaka chero chigadzirwa kuri kuve nechokwadi chekuti mushandisi haadi rubatsiro uye kuvabatsira nenzira yakanaka kwazvo kana vachidaro.
5 Vhidhiyo Yekugadzirisa Matipi evashambadzi
5 Nzira dzeKusimbisa Maitiro pasina Kukanganisa Kugadzira